Zvakanakira Kupinza Bhizinesi
Sarudzo yekupinza bhizinesi rako inowanzoitwa kana mabhenefiti ekupinza achikunda iwo madiki madiki uye zvipingaidzo zvekumisikidza nekumhanyisa mubatanidzwa.
Sanganisa bhizinesi rako re:
Kurerukirwa Kwekuwedzera Mari
Mukurumbira weVashandi veMubatanidzwa
Kureruka Kuendesa Kwevaridzi
Kuvanzika (Iyo "Corporate Chidzitiro")
Sanganisa bhizinesi rako kuti riwedzere kuchengetedzwa. Kuti unakidzwe nekuchengetedzwa kwakanyanya kubva kumatare edzimhosva, kambani kana mubatanidzwa inofanirwa kuvambwa, kushanda, uye kuchengetedzwa nemazvo, neese "mashandiro anoita" akaitwa nemazvo uye kutevedzwa. Kudzivirirwa hakungoerekani kwaitika. Kudzivirirwa zviri pamutemo kunongonakidzwa chete nekambani iyo yakaumbwa chaizvo zvinoenderana nemutemo zviri pamutemo. Uku kudzivirirwa kwemutoro kunopa bhaisikopo pakati pezvisungo zviri pamutemo zvebhizinesi, uye nemidziyo yemugovani Sezvo ivo vagovani vasiri ivo vega vane chekuita nezvisungo zvekambani (ngatirangarirei kuti mubatanidzwa, wakamboumbwa nemazvo uye unomhanya, ikozvino unofungidzirwa sebato rakasiyana), vanogona kudzivirirwa kubva kumatare emakambani. Nekudaro, kana iyo kambani ichibatanidzwa mudare redzimhosva, dzimba dzevanogoverana dzimba kana zvinhu hazvizove panjodzi.
Ngatitaurei muenzaniso: John Smith aive nekambani diki yekuvaka muRiverside, California. Aive achinetsekana nenyaya dzematare dzinokonzerwa nemutoro wekuvaka, saka akaumba mubatanidzwa. Nekuti John akarairwa kuti mubatanidzwa chinhu chakaparadzaniswa nevanhu varidzi, varidzi, kana "vagovani" vanodzivirirwa pachezvadzo kubva kumatare ane chekuita nebhizinesi. Saka mumwe wevashandi vaJohn paakange asina hanya ndokudonha kubva padenga ndokutyoka ruoko, chikwereti chakaganhurirwa kubatanidzwa. Zvinhu zvaJohn zvaaive nazvo, imba yake, mota, uye kuchengetwa, zvaive zvakachengeteka uye zvakachengeteka kubva pakutongwa kana kupihwa kupihwa kwakanangana nekambani yake. Pasina rubatsiro rwekudzivirirwa kunopihwa nekambani, mukana webhizinesi raJohn ungangoburitsa pachena imba yake, mota, uye maaccount ekuchengetedza kumatare.
Sanganisa bhizinesi rako mutero mabhenefiti. Iko kune zvakwakanakira, uye kuchengetedza, kunowanikwa kune rakabatanidzwa bhizinesi. Semuenzaniso, Brian Smith., Muridzi wekambani yekugadzira webhu muMinneapolis, aigara achibhadhara mutero wemari pane chero purofiti yakaratidzwa nekambani yake. Iyi "post tax" yemubhadharo yakazoshandiswa kubhadhara mari yaanoshandisa, kuwedzera kuaccount account yake, uye nekupa mari yake yekuziva. Akange achishandisa yakawanda "post-tax" mari. Mushure mekudzidza nezve mabhenefiti ekubatanidza bhizinesi rake, iye zvino anoendesa mashumi ezviuru zvemadhora pagore muhomwe yake yemudyandigere. Mari yacho inopihwa yemutero mahara uye inokura yemutero mahara kusvikira iye atora basa Iyi sarudzo yanga isingawanikwe kwaari asati aisa. Anonyora zvekare zvese zvekurapa zvaakashandisa, kusanganisira zvinyorwa, kuburikidza nekambani yake, uye anokwanisa kunyora zana kubva muzana yeinishuwarenzi yake maringe nekungobviswa kwe100% kunowanikwa kune kudyidzana kana kuzvimiririra chete. Iye anotoreja mota yekambani uye anonyora cheki mwedzi wega kubva kubhangi rake remubatanidzwa. Izvi zvinongova zviono zvemhando yezvakanaka zviripo nekumisikidza kambani yako seboka.
Imwe nzira yekuchengetedza mutero inonzi "mari inoshanduka." Kuchinja kwemubhadharo kunotendera kuti mari yekambani igovaniswe zvine hungwaru pakati pevanogovana nekambani nenzira inobvumidza kuti mitero izere kudzikiswa.
Pamusoro pezvo, mubatanidzwa une mari iri pasi pemadhora matatu miriyoni pamari yemari ndeimwe yemhando dzebhizimusi dzisina kuongororwa. Zvakare, fomu rebhizinesi rakanyanya kuongororwa i "Shedhiyo C" fomu rekuzvishandira.
Kutendeseka ndeimwe bhenefiti inopihwa kukambani inosanganisirwa. Vatengi uye mamwe mabhizinesi anowanzo kunzwa akachengetedzeka kupinda muzvinhu zvine chekuita nekambani zviri pamutemo mutemo nekuti zvinoita kuti unzwe kuvimba nekambani. Kune vanoita mari mukati uye vanokweretesa kubhizinesi, rinovapa ruzivo rwekuti zviwanikwa zvavo zvekudyara zvinopihwa zvirinani kuchengetedzwa zviri pamutemo. Kambani inogona zvakare kuve nechikwereti cheyayo pachayo zvisinei nezvikwereti zvevaridzi kana vagovani. Matanho nemaitiro ayo bhizinesi rinofanira kupfuura nawo kuisa anoratidza mutengi kuti kambani yakachengetedza "Inc." mushure mekunge zita rekambani raratidza chishuwo chavo chekuve bhizimusi rakamira-refu mumusika.
Sanganisa bhizinesi rako kuti uwane mikana yekudyara. Ipo wega hupfumi uye kudyidzana kwakajairika kune mashoma ekuti vangakwidze sei mari kubhizinesi ravo, mubatanidzwa unogona kukwidza mari kuburikidza nekutengesa kwema stock stock, kana kufarira, mukambani. Vashandi vemari vanonyanya kukwezva kune mukana webhizimisi apo kutarisana kwavo nechisimba kune zvishoma. Vashandi vemari vanowanzoda kudzoka kwakanyanya pane yavo yekudyara nekombiri diki sezvinobvira. Kana chimwe chinhu chikatadza uye kumhan'arirwa kumatare, vanoda kuziva kuti dzimba dzavo uye maakaundi avo havana njodzi yekurwiswa. Mabhangi mazhinji anoda kuti bhizinesi riwanikwe vasati vapa chikwereti chebhizinesi diki.
Kuva ne "CEO" kana "Mutungamiri" mushure mezita rako, pamwe ne "Inc." mushure mezita rako rebhizinesi pakadhi rebhizinesi, rinogona kuvhura masuo uye nekupa mikana yaisazowanikwa neimwe nzira. Kushamwaridzana nevamwe vanobudirira vezvemabhizinesi kunogona kufumura imwe kune mazano ebhizinesi ayo anogona kuve nemhedzisiro inokanganisa mari. Zvakare, vangangoita vatengi vanogona kuve vanogonesa kunzwa iyo yekutengesa mharidzo kana bhizinesi chikumbiro kana zvichibva kuna "CEO" pane kungova iye oga muridzi.
Mumwe muenzaniso: N. Jorgensen aimbo tengesa kiredhiti kadhi mutengesi account account kutanga mabhizimusi. Pasina zita rekambani rake, aiwanzo sangana nekushorwa paakashevedza kune vangangove vatengi. Akabva ave nehungwaru: “… uyu ndiN. Jorgensen, CEO weCard Processing Corporation…” akawedzera kugona kwake kusvika kune vanoita sarudzo, uye nokudaro akawedzera purofiti yake yepazasi. Icho chokwadi chekuti aive aine zita rekufananidza chinzvimbo chake chitsva chaive chakaburitswa chaive chiyero chaaida kusvika kune vanoita sarudzo.
Bhizinesi rakabatanidzwa rine chinguva chisingaperi kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira muzvinyorwa zvekubatanidzwa. Hupenyu husingagumi uhu hunobvumidza iyo kambani kuramba ichiripo uye ichiita bhizinesi, kunyangwe zvichitevera kufa kusingatarisike kwemuridzi, kana danho revaridzi vega rekutengesa kufarira kwavo kukambani. Wal-Mart neFord Motor Company, semuenzaniso, vakapfuudza nhaka kumitezo yemhuri iyo inofanirwa kuenderera kwezvizvarwa zvakawanda.
Nyore Kutamisirwa kweIyo Muridzi
Iyo inosanganisirwa kambani inogona kukurumidza kuendesa varidzi uye inoshanda mashandiro ebhizinesi. Iri danda rekudzora rinogona kuendeswa chero izere, kana muchidimbu, kazhinji nekutengesa kana kuendesa kwekambani stock. Kuendeswa kweiyo muridzi kunowanzoitika kune zvakavanzika, zvemukati nyaya uye hazviwanzo kuve pachena kusefa.
Iwo epakati manejimendi anowanikwa mumabhizinesi akaisirwa anobatsira kutaurirana kwemakambani panguva dzekutengesa nekuita kuti chiitiko chive chinoshanda kupfuura kudyidzana chete. Kana zvasvika pakusunga zvibvumirano uye zvakakwirira zvisarudzo zvebhizinesi, kutaurirana uku kunoita kuti zvisarudzo nezvibvumirano zviitwe nerubatsiro kubva kune mumwe munhu kana mapato makuru ane chekuita nekambani. Izvi zvinopesana nekudyidzana, uko sarudzo huru dzinowanzoitwa neumwe neumwe wako, nechibvumirano chinodiwa kune mazhinji esarudzo idzi.
Sanganisa bhizinesi rako kuti ripe kusazivikanwa kune vagovana, vatungamiriri, maofficial, uye varidzi vekambani kana mubatanidzwa. Uku kusazivikanwa kuri pasi pemitemo yemuno yenyika iyo bhizinesi inosanganisirwa, asi zvinowanzoreva kuti bhizinesi rakabatanidzwa rinogona kubvumidza munhu kumhanya, kubata, uye kuve nebhizinesi pasina zita ravo rinowanikwa pane zvinyorwa zveveruzhinji. Mazita evanogovana haawanzo kuwanikwa muzvinyorwa zveveruzhinji. Anosarudzwa mukuru uye director director, uko mumwe munhu asiri ivo vagovana anoonekwa pane iwo mahofisi runyorwa ibasa rinowanikwa munzvimbo dzinoverengeka. Izvi zvinobvumidza kuti wega muridzi apiwe zita risingazivikanwe, kusiyana nehushe proprietorship kana kudyidzana.
Izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu uye mabhenefiti ekufunga kana uchifunga kutora iyo kusvetuka uye kuisa rako bhizinesi. Kunyangwe mamiriro ese ezvinhu achisiyana, kusanganisira bhizinesi rako inhanho inotevera inonzwisisika kana paine zvataurwa pamusoro apa zvakakosha kwauri. Unogona kutanga maitiro izvozvi nekudzvanya imwe yemabhatani eodha pane ino peji.
Kune zvimwe zvinhu zvinofanirwa kutariswa kana uchibatanidza Izvi zvinosanganisira chokwadi chekuti kune zvemuno zvehurumende nezvinodiwa zvemubatanidzwa zvinoda kuzadzikiswa, izvo zvinodiwa kuti zviitwe zvichiteerana nemutemo wekambani yehurumende mune bhizinesi iri inosanganisirwa, kuiswa kwezvinyorwa zvinodiwa zvekubatanidzwa nehofisi yehurumende chaiyo, uye kubhadharwa kwemitero yenyika nehurumende uye mubhadharo, pamwe nechero bhizimusi rezinesi rinobhadharwa nehurumende yemuno. Makambani Akabatanidzwa anogona kusanganisa bhizinesi rako nekukurumidza uye nyore. Kune zvakare mamwe akareruka "emakambani masisitimu" (akatsanangurwa pakureba kumwe kunhu pane ino saiti) ayo anofanirwa kucherechedzwa mukati mekambani bhizinesi modhi. Iyo mubatanidzwa inofanirwa kushanda pamwe nehutungamiriri chimiro chinosanganisira vemakambani vakuru, uye bhodhi revatungamiriri. Izvi zvinogona kuve munhu mumwe chete akabata zvese zvinzvimbo. Ndokumbirawo uve nechokwadi chekuverenga zvedu chaizvo kuburikidza nerondedzero yemabasa aya anouya nepakeji yako, uye uone kuti tingarerutsa sei maitiro ese kuitira kuti iwe nekambani yako mutange kunakidzwa nezvakanaka zvekubatanidzwa ipapo ipapo.